2022 Baabuurka Honda Baasaboorka si uu ugu tartamo taxanaha Ururka Rally American
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » 2022 Baabuurka Honda Baasaboorka si uu ugu tartamo taxanaha Ururka Rally American
Koox injineero Honda ah ayaa qaadaya tartanka cusub ee Baasaboorka Honda. Honda ayaa daaha ka qaaday gaadhigeeda heerka Baasaboor ee 2022 oo si gaar ah loogu dhisay tartanka kooxda Hormarinta Performance Development (HPD) Maxxis Rally kooxda, iyada oo muujinaysa awoodda adag iyo cimri dhererka loogu talagalay baabuurta fudud ee Honda.
Soo bandhigida Baasaboorka 2022 ee naqshada cusub ee qalafsan, gaadhiga isu soo baxa waxa uu tartankiisii ​​ugu horeeyay ka sameeyay Lake Superior Performance Rally (LSPR) ee Michigan ee Oct. 15 iyo 16. Waxa ay ku tartami doontaa isu soo baxa isku soo baxa ee American Rally Association (ARA) ee taxanaha koorsada dhacdooyinka ilaa 2022 xilli-kooban ee fasalka 4WD.
Tusaalaha muhiimka ah ee Honda “Ruuxa Racing,” kooxda tartanka HPD Maxxis Rally waxay ka kooban yihiin saaxiibada Honda ee ku saleysan Xarunta Horumarinta Gawaarida ee fadhigeedu yahay Ohio. Kooxdu waa qayb ka mid ah kooxda weyn ee Honda of America Racing Team (HART), oo ka kooban la-hawlgalayaasha horumarinta iyo xarumaha wax soo saarka ee Waqooyiga Ameerika.
Iyada oo baabuurta la hagaajiyay ay ku gaadheen xawli ka badan 100 mph koorasyada dhulka dabiiciga ah ee xiran oo ay ku jiraan quruurux, wasakh, dhoobo iyo baraf dariiqyada daboolaya boqolaal mayl, taxanaha Horyaalka Qaranka iyo Gobolka ee ARA waa tartan aad u adag. Tartankii LSPR, gaadhiga isu soo baxa baasaboorka Honda waxaa waday injineer Honda Chris Sladek, oo ah injineer imtixaan ka joojin ah oo fadhigiisu yahay Ohio xarunteedu tahay Ohio ee Auto Development Auto Development Centre, waxaana wada jir u waday Gabriel Nieves, injineer naqshadaynta chassis ee fadhigiisu yahay isla xarunta.
Soo jiidashada ugu badan iyo waxqabadka, gaadhiga isu soo baxa Baasaboorka waxa lagu rakibay BRAID Winrace T rally wheels (7.5″x17″) oo lagu duuduubay mid ka mid ah mudaharaadka Maxxis' ee la xaqiijiyay RAZR M/T ama RAZR A/T taayirada (265/70-R17) , iyadoo ku xidhan xaaladaha dhacdada. 1/8-inch oo ah digsiga saliidda aluminium qaro weyn oo la sameeyay iyo taarikada barafka ee gadaal ka duwan ayaa ilaaliya jirka hoostiisa, iyo sidoo kale baalal cufan oo polyetylen ah oo daboolaya haanta shidaalka iyo qaybaha kale. Carbotech XP12 suufka biriiga ah iyo dareeraha tartanka kulaylka sareeyo waxay bixiyaan waxqabadka bareegga joogtada ah ee baahida jawiga isu soo baxa.
Si la yaab leh, soo saarista Baasaboorka 3.5-litir i-VTEC® V6, 9-xawaaraha tooska ah ee gudbinta oo leh shifiyeyaasha paddle, intelligent Variable Torque Management (i-VTM4 ™) nidaamka wadista taayirrada oo dhan, iyo dhammaan qaybaha ganaaxa ayaa laga tagay iyada oo aan loo beddelin tartanka; waxa kaliya ee lagu darayo waa qaboojiye dareere ah oo si toos ah u gudbinaya oo ka yimid xirmada jiidista ee la heli karo ee Baasaboorka. Dareewalku wuxuu u adeegsadaa habka isku xigxiga ee gudbinta iyo beddelayaasha suufka si loo xakameeyo, iyo Nidaamka Maareynta Maareynta Caqliga ee Baasaboorka Habka Ciidda waxaa loo adeegsadaa qaybinta qulqulka ugu habboon iyo waxqabadka dusha dabacsan.
"Xaqiiqda ah in aynaan u baahnayn in aan wax ka beddelno 2022-ka Honda Passport-ka wadista ama joojinta ee ciqaabta dhulka iyo tartanka waxay ka hadlaysaa awoodda iyo waxqabadka heerka caadiga ah ee Baasaboorka," ayuu yiri injineer Honda iyo tartanka isu soo baxa Chris Sladek. .
Badbaadada dheeraadka ah, gudaha gaadhiga isu soo baxa Baasaboorka waxa ka mid ah kuraasta tartanka OMP oo leh suunadaha tartanka lix-dhibcood, qafis badbaado ah, nidaamka xakamaynta dabka, kombuyuutarka isu soo baxa iyo nidaamka xidhiidhka gaadhiga. Si loo yareeyo miisaanka, kuraasta danbe, roogaga, dahaarka dhawaaqa, iyo qaybo kale oo gudaha ah ayaa la saaray, iyo SUV dhinaceeda iyo muraayadda daaqada danbe waxaa lagu bedelay Lexan polycarbonate. Xakamaynta bireega-gacan-biyoodku waxa ay wanaajisaa dhaqdhaqaaqa iyada oo loo marayo geeso cidhiidhi ah, halka qiiqa wax laga beddelay uu soo saaro dhawaaq dhiirigelin leh oo saxeex ah. Naqshadeynta HPD, sawirada duubista bannaanka ee Baasaboorka ayaa muujinaya awoodda qallafsan iyo xiisaha leh ee Baasaboorka Honda.
"Waxaan diyaar u nahay inaan la tartanno Baasaboorka Honda 2022 ee adag," ayuu yiri Injineer Honda iyo wada-darawal Gabriel Nieves. "Waxay noqon doontaa xilli ciyaareed heer sare ah."
Isu soo baxa Waxqabadka Sare ee Harada 2021 ee Oktoobar 15 iyo 16, kooxdu waxay ku tartamaysay taxanaha Gobolka Bari ee ARA. Maalintii ugu horeysay ee tartanka ayaa ka koobneyd marxalado aad u dheereeya oo qaloocsan, waxaana uu socday xilli dambe oo habeenimo ah, halkaasoo nalka kaaliyaha baasaboorka uu muhiim u ahaa ilaalinta xawaaraha tartanka ee kaynta. Kooxdu waxay si joogto ah ugu dhex orday wakhti ka mid ah 10ka sare ee 42 ka mid ah tartamayaasha gobolka, laakiin taayir ka go'ay marxaladda 3 ayaa dib u dhigtay kooxda, taasoo keentay inay dhammeeyaan wax ka badan 9 daqiiqo ka dib intii la filayay masraxa.
Marxalado badan oo farsamo, qallafsan, iyo qoyan ayaa kaydsanaa maalintii labaad, iyadoo Baasaboorku uu si fiican u shaqaynayay Maxxis RAZR M/T taayirkiisa. Kooxdu waxay si joogto ah u dhejisay wakhti ka mid ah 15ka tartame ee ugu sarreeya gobolka.
Kooxdu waxay ku dhammaatay 22nd 42 ka mid ah tartamayaasha gobollada, oo soo galay 4th 6 ka mid ah tartamayaasha fasalka 4WD ee xaddidan.
2021 LSPR waa dhacdadii marxaladda saddexaad ee isu soo baxa oo ay kooxdu ku tartameen Baasaboorka Honda. Intii lagu guda jiray dhacdadeedii ugu horreysay—Rally 2019 Southern Ohio Forest Rally (SOFR), oo qayb ka ah taxanaha Gobolka Bari ee ARA—kooxdu waxay dhigteen 2nd fasalka 4WD ee xaddidan iyo 12th guud ahaan 75 tartame.